> Resource > iPhone > Dr.Fone u iPhone: ka iPhone Ladnaansho tirtiray Data
About Dr.Fone u iPhone
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala iPhone inuu ka soo kabsado xogta tirtiray ka 5S ka iPhone, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, wac taariikhda, qoraalo, ilaa 15 nooc oo file by si toos ah aad ka baareyso iPhone ama soo saarida aad gurmad Lugood. Taasi waa in la yidhaahdo, haddii aad leedahay raad raac Lugood ama ma, waxaad isticmaali kartaa Dr.Fone this u iPhone dib u soo ceshano xogta lumay.
Sida loo isticmaalo Dr.Fone u iPhone inuu ka soo kabsado xogta lumay
Tani Dr.Fone u iPhone siinayaa versions maxkamad labada Windows iyo OS Mac X.You u isticmaali kartaa in baarista iPhone ama Macdan gurmad Lugood si loo hubiyo waxa aad ka heli kartaa. Version maxkamad waa lacag la'aan. Just download it hoose your computer.
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPhone inuu ka soo kabsado xogta lumay la Dr.Fone u iPhone
Qeybta 2: Waraaqda Lugood gurmad inay ku eegaan ceshan xogta hore
Qaybta 1aad: Si toos ah baarista iPhone inuu ka soo kabsado xogta lumay
Ka hor inta xira iPhone in kombiyuutarka, xasuuso inaad gab .Wadashaqayntaas ee si toos ah ula Lugood, ka hortagga gurmad Lugood ee ka updated. Haddii aad isticmaasho iPhone 5 ama iPhone 4s, Dr.Fone ee iPhone idin tusin daaqad sida soo socota:
Haddii aad isticmaasho iPhone ah 4 ama iPhone 3GS, suuqa kala noqon doonaa oo kala duwan:
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone xogta laga badiyay waxaa ku
Waxaad si toos ah riixi kartaa batoonka Start Scan si aad u hesho iPhone marsiiyey haddii aad isticmaasho iPhone 5 ama iPhone 4s. Wixii lagu daydo iPhone kale, waxaad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka ah adigoo raacaya sharaxaad hoos ku qoran:
1. Ku qabo iPhone oo guji Start si ay u bilaabaan.
2. Isla markiiba riix Home iyo badhamada Power ku saabsan iPhone waqti isku mid ah ee saxda ah 10 ilbiriqsi.
3. Ka dib markii in, waxaad sii daayo karaa batoonka, Laakiinse ay xajiyaan riixaya badhanka Home muddo 10 ilbiriqsi oo kale. Marka ay ka badan, waxaad heli doontaa fariin ku leh in aad ku soo gashay hab iskaanka ah. Markaasay aad arki doonaa geedi socodka iskaanka sida soo socota.
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan xogta lumay ee aad iPhone
Marka barnaamijka la dhammeeyo iskaanka, waxaad ku eegaan karo oo calaamadee dhammaan xogta recoverable in natiijada scan, sida sawiro, xiriirada, fariimaha, qoraalada, soo wac taariikhda, iyo sidaas. Marka previewing, aad sax karo shayga aad rabto in aad soo kabsado. Markaasuu iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo gujinaya Ladnaansho .
Qeybta 2: Waraaqda gurmad Lugood in Falanqeynta ceshan xogta hore
Haddii aad qabto wax gurmad Lugood ah, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Dr.Fone this u iPhone si ay u soo saaro, waayo, previewing iyo soo kabsaday. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u eegista samayn. Waxa kaliya ee aad qaadataa laba talaabo.
Tallaabada 1. Dooro Lugood gurmad u fiirsato
On menu ugu sareeya, waxaa jira labo ikhtiyaar: kabsado Device macruufka iyo soo kabsado Lugood ee kaabta File. Marka socda Dr.Fone ee iPhone, ee ka dooro mid labaad, ka dibna waxaad arki doonaa liiska Lugood gurmad files on your computer. Mid ka mid ah si aad u iPhone Dooro iyo riix Start Scan si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan
Ka dib ku dhawaad ​​15 ilbiriqsi, scan wuxuu ku dhamaan doonaa oo sabab u scan, halkaas oo aad ku eegaan kara waxa ku qoran in gurmad Lugood si faahfaahsan waxaad heli doontaa. Sax waxyaabaha aad jeceshahay iyo aad u hesho on your computer eegista adigoo gujinaya ku Ladnaansho button.